सामाजिक सञ्जालमा धरानकी एक सुन्दर युवतीको फिगरको निकै चर्चा, फम लगायो हो ? भन्नेहरुलाई दीईन कडा जवाफ – Sapana Sanjal
July 29, 2021 215
Sapana Sanjal : धरानकी एक जना सुन्दर युवती । सामाजिक सञ्जालमा उनको फिगरको निकै चर्चा छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय छन् । सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै युवायुवतीका लागि अपरिहार्य साधन भएको छ । समय विताउन सामाजिक सञ्जाल एउटा सजिलो माध्यम भएको छ । कतिपय युवायुवती एकाएक भाइरल र चर्चित हुने गरेका छन् ।
Prevबिजय शाहीले हामिलाई थाङ्नामा सुताउनुको पछाडी ऋषि धमला, रबी लामिछाने र भाग्य न्यौपाको ठुलो हात छ भन्दै खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो सहित
Nextओलम्पिकमा खेलाडीहरुले मेडल किन टोक्छन् ? यसको ऐतिहासिक कारण यस्तो छ